China Notebook & sticky Notes pabrik sy mpanamboatra | SJJ
Ny kahie sy ny soratra miraikitra dia mety hanampy anao hanaraka ny fanendrena anao na ny diarinao momba ny fahatsiarovana ekipa tianao indrindra. Fanomezana lehibe ho an'ny hetsika vondrona, orinasa ary maro hafa. Namboarina tamin'ny anaran'ny orinasa na ny sary famantarana anao, manampy anao hampiroborobo ny orinasanao sy ny marikao.
Notebookary ny taratasy miraikitra mety hanampy anao hanaraka ny anjaranao na ny diarinao momba ny fahatsiarovana ekipa tianao indrindra. Fanomezana lehibe ho an'ny hetsika vondrona, orinasa ary maro hafa. Namboarina tamin'ny anaran'ny orinasa na ny sary famantarana anao, manampy anao hampiroborobo ny orinasanao sy ny marikao.
Ny vidiny dia mifaninana amin'ireo mpanamboatra efa misy. Azafady mba omeo anay ny pitsopitsony amin'ny antsipiriany, koa ny habetsahana ary ny sary; Manoro hevitra anao izahay ny vidiny tsara indrindra mandritra ny fotoananay. Miandry ny fanontanianao ary ataonay antoka fa tsy ho diso fanantenana ianao.
Kahie manokana & memo sticky memo
Fanamarihana miraikitra be dia be amin'ny endrika, loko ary maro hafa
Adhesive tsy manam-paharoa natao hampiasaina amin'ny taratasy na amin'ny drafitra
Mamolavola ary mamorona anao manokana kahie vita pirinty manokana miaraka amin'ny kantonao
Serivisy tsara, vidiny ary kalitao, fandefasana haingana
Teo aloha: mpitondra
Manaraka: Sharpener amin'ny pensilihazo
kahie vita pirinty manokana
memo sticky memo
kahie vita pirinty